MADAXWEYNE MOI OO QAABILAY CABDIQASSIM
Nairobi,31st October 2001
Report prepared by Banadir.com
Madaxweynaha Kenya Danial Arab Moi oo ku qaabilay maanta guriga Madaxtooyada ee Nairobi wefdi uu hogaaminayo Madaxweynaha Dawladda KMG ah ee Soomaaliya Cabdiqassim Salaad Xasan, ayaa ku tilmaamay midnimida Somalia inay tahay muqadas, isagoo ugu baaqay inay Somalida ka faa'iideystaan fursaddan qaaliga ah ee shirka heshiisiinta Nairobi, geeska Afrikana uu nabad u baahan yahay,waxna uusan kala hari doonin dadaalka uu ka wado sidii loogu soo dabaali lahaa geyiga Soomaalia nabad waarta .
Sidoo kale, wuxuu Cabdiqassim ugu mahad celiyay Madaxweyne Moi dadaalka uu ka muujiyay nabadeynta Somalia . Wefdiga Cabdiqassim oo ay ku jiraan dhawr wasiir, uuna ka mid yahay xildhibaan Cali Mahdi Maxamed waxaa saaka ku soo dhoweeyay garoonka dayaaradaha ee Jomo Kenyatta Wasiirka Amniga Gudaha ee Kenya. Wuxuuna Cabdiqassim u yimid inuu uga qaybgalo Kenya shirka nabadeynta ee uu Madaxweyne Moi ugu yeeray inuu ku dhexdhexaadiyo Soomalida .
Sidoo kale waxaa la sheegay in hogaamiye kooxeedyada mucaaradka ah ee ku bahoobay ururka SRRC oo iminka ku sugan Magaalada Godey ee dalka Ethiopia ay la soo xiriireen Dawladda Kenya, iyagoo u xaqiijiyay inay imaanayaan Nairobi berri oo ah 1da November 2001, waxaase hore u joogay Kenya Cusmaan Xasan Cali (Caato) iyo Mawliid Macaana Maxamuud oo ah Xoghayaha Guud ee golaha SRRC .
Habka uu u dhacayo shirka iyo goorta la qabanayo ayaan weli la ogeyn, laakiin waxaa ku hawlan qabanqaabada shirka Xafiiska Madaxtooyada iyo laanta Sirdoonka ee Kenya .Labada dhinac ee la dhex dhexaadinaya ayaa sheegay inay ku raja weyn yihiin in waxyaabo la taaban karo ay ka soo baxaan shirkan.